CAJIIB: Gabar Ugandays Ah oo Kalideeda Ugu Deeqday Wiil Soomaaliyeed - Banaadirsom
Home Arimaha Bulshada CAJIIB: Gabar Ugandays Ah oo Kalideeda Ugu Deeqday Wiil Soomaaliyeed
CAJIIB: Gabar Ugandays Ah oo Kalideeda Ugu Deeqday Wiil Soomaaliyeed
Waa dhacdo hadal hayn badan dhalisay kana farxisay Cabdiraxmaan Maxamed Ibraahim oo loo garan ogyahay (Cabdiraxmaan Waryaa) isla markaana mudo dhowr sano ah daris la ahaa xanuun ka haleelay Kelliyaha kaas oo markii ugu horeeysay uu isku arkay sanadkii 2015-kii xili uu soo gutay waajibaadka Xajka. Wuxuu ku nool yahay dalka Norway.
Gabadhaan oo lagu magacaabo Marian Nabunya, asal ahaana ka soo jeeda dalka Ugandha ayaa ka mid aheyd macaamiisha dukaan uu uu Cabdiraxmaan ku lahaa magaalada Oslo waxaana ay is yaqiineen mudo badan taasi oo horseed u noqtay in ay si qoto dheer u wareeysato xaaladda caafimaad ee Cabdiraxmaan.
Cabdiraxmaan oo xaaladiisa caafimaad ay ku qaaday inuu safro dalalka Jarmalka iyo Mareykanka ayaa mar walba la siinayay daawo kaalmaati ah oo mudo kooban uun uu isticmaalayay.
“Maalin maalmaha ka mid ah oo aan wada qadeyneynay waxaan isku soo qaadnay xaaladeyda caafimaad oo sii liidaneysay, arageygeyna uu sii daciifayay marka iyadaa i wyadiisay oo igu tiri maalmahaan muuqalkaagu ma wanaagsanee sidee wax u jiraan “, ayuu yiri Cabdiraxmaan ooo ka sheekeynaya sida ay ku timid tabarucaadda Mariam.
Intaas kadib Markii uu Cabdiraxmaan u sheegay in u ubaahan yahay in laga badela kellidiisa, ayay u sheegtay jawaab la yaab leh oo uusan filaneynin.
Marian Nabunya ayaa qaadatay go’aan waxayna aaday cusbitaalka si ay ugu sheegto in ay dooneyso in ay kellideeda ku caawiso dhibane Cabdiraxmaan.
Baaritaan ka dib waxay u saxiixday inay ugu deeqdo kelllideeda si mutadawcnimo ah.
Cabdiraxmaan ayaa hadda sugaya in kellidaasi loo geliyo, waxaana uu sheegay in shekadan uu go’aansaday inuu la wadaago bulshada si buu yiri uu dadka ugu baraarujiyo in caawinta qof buko oo xubin muhiim ah u baahan loo caawiya iyadoo ana la eegeynin xiriirka uu qofkaasi kula wadaago.
” Dad badan oo Soomaali ah ayaa cabsi ka qaba inay sidan oo kale u caawiyaan dadka asxaabtooda ah ee xannusan. ” Wuxuu ugu baaqayaa dadka inay gabadhan tusaale ka dhigtaan oo ay xitaa xubnahooda ku deeqaan marka ay dhintaan.
Mr Cabdiraxmaan waxaa uu sheegay in uu faraxsanyahay uuna leeyahay nasiib u horseeday in uu helo saaxiib qaali ah oo ah gabadha ugu deeqayso kellideeda.
Waxaa uu hadda rajo fiican ka qabaa xaaladiisa caafimaad waxaana sheekadiisa ay dhalisay hadal hayn badan oo la xiriirta sida gabadhan ajnebiga ah ninkaan Soomaaliga ah ugu caawisay xubin muhiim ah oo jirkeeda ka mid ah .